Tag: ọnụ ọgụgụ | Martech Zone
Tag: ọnụ ọgụgụ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhazi oke ọrụ ịre ahịa gị nke ọma, ị ga-arụ ọrụ ka mma maka ịhazi ụbọchị gị, nyochagharị netwọkụ gị, mepụta usoro ahụike, yana iji usoro nke nwere ike inye aka. Technologymụta Teknụzụ Na - enyere Gị Aka Lekwasị Anya Maka na m bụ onye na - ahụ maka teknụzụ, aga m ebido ya. Amaghị m ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na enweghị Brightpod, sistemụ m na - ebute ọrụ, chịkọta ọrụ dị iche iche, ma mee ka ndị ahịa m mara ọganihu.
Tọzdee, Disemba 24, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Onwa isii gara aga abụrụ m nsogbu dịka m bidoro azụmahịa nke m. Nnukwu ihe ịma aka bụ cashflow… ị ngwa ngwa chọpụta na ọ bụ ezie na ị na-arụsi ọrụ ike, ego apụtaghị na ọnụ ụzọ. N'ihi ya, m na-agba ọsọ ọsọ ma na-eche. Enwebeghị m ịzụ ahịa n'ezie maka ọfịs n'oge a. Echere m na m ga-ekekọrịta ndakpọ nke ngwá ọrụ m nke ahia. Enweghị m ihe ọ bụla pụrụ iche ma na-arụ ọrụ